एउटी किशोरी भन्छिन्- म पोर्नस्टार बन्न चाहन्छु - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / Glamour World / एउटी किशोरी भन्छिन्- म पोर्नस्टार बन्न चाहन्छु
By Digital Khabar on September 19, 2015
आश्विन २, २०७२-
यो मेरी ममीको %9@
A8्सेप्ट हो । ममीलाई फोटोग्राफीमा पनि रुचि छ । त्यसैले ममीकै कन्सेप्टअनुसार घरभित्रै फोटोसुट गर्‍यौं, झन्डै एक महिनाअघि ।
किन नि ? यो गलत काम भएन ?
कसरी गलत काम भयो ? मैले चोर्न, ढाँट्न वा मार्न सिकाएकी होइन । अरूको हत्या गर्नु पो गलत काम हो । आफ्नो स्वेच्छाले कसैलाई हानि–नगरी गरेको काम कसरी गलत हुन्छ ?
यो मुद्दामा कानुन मौन छ – ज्योति पौडेल, अधिवक्ता
ह्यारेसमेन्ट होइन काउन्सिलिङ – मेनुका थापा, अधिकारकर्मी
पन्ध्र वर्ष नपुग्दै…
शर्लिन चोपडाको नग्न…
घरबाट निकालिइन सन्नी…
दोषी पाइए सन्नीलाई…
” अजय देवगण बेस्ट…
Related Itemsdigital khabarEntertainmentFilmGlamourInternationalModelsmoviesNationalNepalNewsTechnologyWorld
← Previous Story सम्पदा भन्छिन्, ‘काठमाडौं शहर हेर्दा लाग्छ रहर’ ‘ठमेल डटकम’ (भिडियो)
Next Story → ‘हामी पनि उत्साहित छौं’